इकोनोमिक अपडेट : December 2016
रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्दैन: अर्थमन्त्री महरा
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महरा सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री हुन् । यसअघि पनि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भइसकेका महरा तत्कालीन सरकार तथा माओवादीबीचको वार्ताकालमा तीनै पटक संलग्न थिए । पटक–पटक पार्टी प्रवक्ता तथा महासचिवसमेत रहिसकेका महरासँग सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेको पनि अनुभव छ ।
राजनीतिक एजेन्डाकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ओझेलमा परेको बताउने महरा राजनीतिक सहमतिसहितको पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । अर्थमन्त्रालयको यतिबेला सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै पुँजीगत खर्च बढाउनु रहेको बताउने महराले साविकभन्दा ४५ दिन पहिल्यै बजेट आए पनि खर्च गर्ने शैली पुरानै भएकाले खर्च हुन नसकेको अनुभव गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना दिगो आर्थिक विकास असम्भव रहेको मान्यता राख्ने उनी उपयुक्त विकासको मोडल नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन् । महरासँग बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, पूरक बजेटको तयारी तथा समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा केन्द्रित रहेर निरु अर्यालले गरेको कुराकानी:
हरेक वर्ष समयमै बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति त यस वर्ष पनि दोहोरियो, तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको अर्थमन्त्रालय किन यति निष्क्रिय ?
भर्खरै मात्र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिएको छ । यो सकिएलगत्तै हाम्रो मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर खर्चको स्थिति के हो भनेर सोध्ने र खर्च हुन नसकेको विषयमा पनि समीक्षा गरेको छ ।
अख्तियारी दिन बाँकी छ कि छैन, निर्धारित बजेट आयोजनासम्म पुग्ने काम भयो कि भएन भनेर छलफल गर्ने काम भएको छ । त्यसैगरी सम्झौताअनुसारका काम अघि बढे कि बढेनन् भनेर छलफल गरेका छौं । अर्थमन्त्रालयलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै पुँजीगत खर्च कसरी गर्ने भन्नेमा छ ।
यस विषयमा मन्त्रालयका माथिल्लो तहका साथीहरू तथा मन्त्रालयमातहतका विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाई ‘एक्सन प्लान’ बनाएर काममा जानुस् भनेको छु । साथै निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँग पनि अर्थमन्त्रालयले के गर्दा खर्चको परिमाण बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले छलफल गर्दै छौं ।
यसपटक साविकभन्दा ४५ दिन पहिल्यै बजेट आए पनि खर्च गर्ने शैली पुरानै देखियो । यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
तपाईंले भनेको कुरा एकदमै सही हो । छिटो बजेट आउनुको अर्थ छिटो खर्च होस् भन्ने नै हो । बजेट पहिले खर्च होस्, विकास निर्माणका कामले गति लिन्छन् भन्ने थियो तर खर्च गर्ने शैली पुरानै देखियो । रकमका हिसाबले दोब्बर खर्च भएको देखिए पनि लक्षित खर्च भएको पाइएन ।
अधिकतम बजेट खर्च होस् र अर्थमन्त्रालयले आफूले गर्ने कामलाई सशक्त बनाउनुपर्छ भनेर तीनवटा कुरालाई विशेष महत्व दिएको छ । मन्त्रालयका तर्फबाट अख्तियारी दिने काममा ढिलाइ गर्नु हँुदैन भन्ने मान्यता छ । अर्कातर्फ ठेक्कापट्टा गर्न बाँकी रहेका आयोजनासँग छिटो सम्झौता होस्, अनुगमन छिटो होस् भनेरै लागेको छ । त्यसैले खर्च बढ्छ भन्ने आशा छ र हामीले खर्च बढाउने काम गरिरहेका छौं ।
हरेक वर्ष सुरुवाती चरणमा खर्चै नहुने खास कारण के रहेछन् ? तपाईंले यो मन्त्रालय सम्हालेको चार महिनामा कारणहरू केके पाउनुभयो ?
खर्च नहुनुका कारण धेरै छन् । गत वर्ष मात्र खर्च हुन नसक्नुका पछाडि भूकम्प र नाकाबन्दीको असर कारण थियो । त्यसका साथै आन्तरिक कारण पनि छन् । हाम्रो काम गर्ने शैली पनि परम्परागत नै देखियो, जसले गर्दा हामीले विकासका आयोजनालाई ‘ब्रेक थ्रु’ नै गर्न सकेनौं । विशेष गरेर ठूला–ठूला आयोजनाहरू समयमा सुरु नहुने, समयमा ठेक्कापट्टा नगर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।
यसका लागि हामीले सबै आयोजनालाई मंसिर मसान्तसम्म ठेक्कापट्टा सम्पन्न गर्न र पुस पहिलो सातादेखि नै काम सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं । यसले एकैचोटि असारमा गएर काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ र विकास खर्च पनि बढ्नेछ भन्ने आशा गरेका छौं ।
तपार्इं अर्थमन्त्री भएदेखि नै पूरक बजेट ल्याउने कुरा गर्नुभएको थियो, यतिबेला तयारी कहाँ पुगेको छ, पूरक बजेट आउँछ कि आउँदैन ?
सरकार परिवर्तनसँगै पूरक बजेटको कुरा स्वाभाविक रूपले आउँछ र आउनु पनि पर्छ । किनभने एउटा सरकारले बजेट ल्याउने अर्को सरकारले खर्च गर्ने हँुदा नीति र कार्यक्रम फरक हुन्छन् र यसले पूरक बजेटको जरुरत पर्छ ।
साथै, प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा सम्बोधन गरेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न पनि पूरक बजेटको आवश्यकता छ र संविधानले पनि पूरक बजेट ल्याउन सकिने प्राबधान राखेको छ । तर यो राजनीतिक सहमतिमा आउने कुरा हो ।
यो विषयमा सबै दल सकारात्मक नै हुनुहुन्छ, राजनीतिक सहमति बन्यो भने पूरक बजेट आउँछ । यो साझा विषय भएकाले सहमति जुट्छ । यसका लागि ठूलो तयारी पनि गर्नु पर्दैन ।
नियमित बजेट खर्च नभइरहेको अवस्थामा पूरक बजेटको औचित्य किन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हैन र ?
नियमित बजेटले सम्बोधन नगरेका विषयहरू जो नयाँ सरकार गठनसँगै आएका छन्, तिनको सम्बोधनका लागि पूरक बजेट चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सदनमा गर्नुभएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पनि नियमित बजेटबाट सम्भव छैन । यो सरकारको प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न थप बजेट आवश्यक भएकाले नै पूरक बजेट चाहिएको हो ।
पूरक बजेटको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
स्रोतका लागि हामीलाई ठूलो समस्या छैन । अहिले सरकारसँग झन्डै ६०/७० अर्ब पैसा बाँकी छ । राजस्व संकलनको अवस्था पनि राम्रो छ । भएको पैसा खर्च नभई बस्नुभन्दा परिचालन गर्नु जरुरी छ । यसलाई परिचालन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने चाहना हो ।
तपाईं अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा रहेको करका विषयमा निकै विवाद देखिन थालेको छ । एनसेलको लाभकर तथा लाभांश फिर्ताको विषयमा अहिले ठूलो विवाद देखिएको छ नि ?
एनसेलको करको विषयमा बाहिर जे आएको छ, हामी पनि त्यही नै मान्यतामा छौं अर्थात् राज्यले पाउनुपर्ने कर कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुन्न । हामीले कर लिने नै हो । तर, कर जो जसबाट लिनुपर्ने हो, उसैसँग लिनुपर्छ । एउटाले नतिरेको भनेर अर्कोसँग उठाउनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ ।
कर कति लिने, कुन प्रक्रियाद्वारा असुल गर्ने भन्ने कुरा हाम्रा कर अधिकृतहरूलाई पूरा अधिकार छ । करमा कानुनबाहिरको छुट कसैलाई हुँदैन । जुन उजुरी छ त्यसको उचित छानबिन हुनुपर्छ । जोसँग लिनुपर्ने हो उसैसँग लिनुपर्छ ।
अहिलेलाई यतिमात्रै भन्छु ।
यो विषयमा राज्यको अनुगमन र नियमन पक्ष फितलो भयो, विशेष गरी अर्थमन्त्रालयले आफ्नो दायित्व पूरा गरेन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
यो अर्थमन्त्रालयको समस्या होइन । विगतमा राज्यबाट केही त्रुटि भएका थिए । ती त्रुटि भएका कुरा सच्याउन कठिन भएकाले अहिले समस्या देखिएको हो । अर्थमन्त्रालयले आफ्नो दायित्व पूर्णतः निर्वाह गरिरहेको छ ।
हाम्रो कर प्रणाली एकदमै झन्झटिलो छ भनिन्छ, करदाताले कर तिरेर पनि अपनत्व महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्था किन आएको हो र करदाताले करलाई बोझ नमान्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ ?
हो, यो कुरा सा¥है मननीय छ । कर प्रणालीमा समस्या छन् र सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय पनि छन् । राज्यलाई कर तिर्नेले राज्य मेरो हो भन्ने महसुस गर्न पाउनुपर्छ । यसो भए मात्र करदाताले कर तिर्न खोज्छन् । तर, अहिले सरसर्ती हेर्दा जबरजस्ती कर तिरिरहेका छौं भन्ने लाग्न पनि सक्छ ।
करदाताले कर तिर्नुपर्छ भन्ने बोध पनि हुने र राज्यले करदाताले कर तिरेपछि देश बन्छ भन्ने हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । विकास–निर्माणमा अलिकति देखिएको तीव्रता कम हुनु भनेको करको प्रतिफल जनताले नपाउनु नै हो । हामीले अघि छलफल गरेकै कुराहरू जस्तै पुँजीगत खर्च तीव्रताका साथ नहुँदा यो अवस्था देखिएको हो ।
विकास खर्च गर्ने र त्यसको प्रतिफल जनताले पाउने हो भने करको दायरा बढ्छ । दोस्रो, करदातालाई पनि राम्रो शिक्षा दिनु जरुरी छ । किनभने राज्य हाम्रो हो, कर तिरेपछि हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने आत्मबोध जनतालाई भयो भने करदाताले कर तिर्छन् । तेस्रो, हाम्रो कर प्रणाली पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ ।
तपाईंले भनेजस्तै कर तिरेको जम्मा भयो कि भएन भन्ने कुरा छ, त्यो जानकारी उसले पाउनुपर्छ । यो चुहावट रोक्नु जरुरी छ । यसका लागि मैले सञ्चारमन्त्री हुँदा पनि ‘मोबाइल पेमेन्ट सिस्टम’को धारणा अघि सारेको थिएँ । जसले घरबाट विद्युतीय माध्यमबाट सीधै कर तिर्नुपर्ने भयो भने करदाताले अपनत्व महसुस फल गर्न सक्छन् ।
तपार्इंले ई–पेमेन्टको कुरा गर्नुभयो, तर यसको कुरा उठेको वर्षौं भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा किन आउन सकेन ?
यो विषयमा हामी निकै पछाडि प¥यौं । यदि कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने हो भने यो अत्यावश्यक भइसकेको छ । विदेशी मुलुकले पनि यो सिस्टम लागू गरिसकेका छन्, उनीहरू जनताकै करबाट समृद्ध बनेका हुन् । मन्त्रालयले यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ र ५÷६ महिनामा नतिजा पनि आउनेछ ।
अर्थमन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत जनता मात्रै करको दायरमा छन् । करदाताको संख्या ज्यादै थोरै भएन र ? थप जनतालाई करको दायरमा ल्याउन के गर्नुहुन्छ ?
करको दायरा बढाउनु नै यसको विकल्प हो । मैले करसम्बन्धी अड्डाहरू बढाउन भनेको छु । कर शिक्षा बढाउन भनेको छु । करमा काम गर्ने जनशक्तिलाई सशक्त बनाउनु भनेको छु । हाम्रो लक्ष्य यस वर्ष ३ लाख करदाता बढाउने भन्ने छ । ४ महिनामा ८२ हजार बढेको छ । अझ गुणात्मक हुने अपेक्षा हाम्रो छ ।
यस वर्ष सरकारले प्रक्षेपण गरेको राजस्व लक्ष्य त पूरा हुने देखिन्छ, तर सँगसँगै पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर भने घटेको छ । रेमिट्यान्स घट्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अब जोखिममा पर्दैन ?
रेमिट्यान्सको न्यून वृद्धिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा न्यून भए पनि असर त पारेको छ । के कारणले घटेको हो भनेर अध्ययन गर्दै छांै । यसले आंशिक असर त पर्छ तर दीर्घकालीन असर गर्दैन । असर गर्ने भनेको परम्परागत प्रथा अर्थात् हुन्डीले नै हो, यसलाई के कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ यो विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।
नयाँ संविधान बनेपछि विकासका कामले गति लिन्छन् भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर, जुनसुकै सरकार आए पनि विकास–निर्माणका कामले गति लिन सकेनन्, हामी कहाँनेर चुक्यौं ?
हामी एकैचोटि धेरै बजेट खर्च गर्न खोज्छौं, तर विकासको मोडल हामीसँग छैन । १ करोड बजेटमा सय वटा कार्यक्रम राख्छौं । गुणात्मक विकासतर्फ हामी कहिल्यै प्रवेश गरेनौं । विकासको मोडलमा ठोस पहिचान भएन । त्यसैले विकास हुन नसकेको हो । अर्को कुरा, हाम्रो अर्थतन्त्र आफैंमा स्वाधीन पनि छैन । त्यसैले स्वतन्त्र रूपमा हामी काम गर्न सक्दैनौं र हामीले चाहेअनुसारको विकास हुन सकेको छैन ।
केही समयअघि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले न्यूनतम आर्थिक एजेन्डामा सहमति गरेका थिए । तर, दलहरूले आफू अनुकूलको व्याख्या गर्दा लगानीको वातावरण खल्बलियो भनिन्छ नि ?
हामीकहाँ मात्र होइन सबैतिर भन्ने गरिन्छ, सबै चीजको मूल नीति भनेकै राजनीति हो । जनताको चाहना भनेको संसारभर आर्थिक विकास नै हो । आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने अन्योल पनि छ । राजनीतिमा हुने बहस अर्थतन्त्रको कुरामा नहुँदा लगानीको वातावरण ओझेलमा नपरोस् भन्ने सबैको सुझाव छ ।
न्यूनतम एजेन्डा परे पनि त्यो कुरामा असर नपरोस् भनेर समझदारी बनाईराख्ने पक्षमै छौं ।
तर राजनीतिक संक्रमणकालले गर्दा आर्थिक नीति–नियमहरू राजनीतिक बहसको एजेन्डामा पर्दैनन् । यो वा त्यो दल भन्ने हुँदैन, सबैको उस्तै समस्या हो ।
त्यसैले गर्दा समस्या आएको हो तर अब संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं । स्थानीय चुनावको कुरा पनि उठेको छ, आशा छ केही सुधार हुने नै छ । कम्तीमा स्थानीय तहका निकायलाई विकासमा मात्रै केन्द्रित गर्न सक्यौं भने मात्र पनि विकास खर्च हुनेछ ।
सरकारप्रति दाताहरूको सहयोग कस्तो रहेको पाउनुभएको छ ?
म अर्थमन्त्रीको हैसियतमा विभिन्न मुलुकका दाताहरूको बैठकमा सहभागी भएको छु । यो सरकारप्रति दाताहरूको आकर्षण बढेको छ । धेरै सम्झौता भएका छन् । जस्तो कि नागढुंगाको कुरा भयो, स्याफ्रुबेसीको बाटो विस्तार गर्नेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोकिएका सम्झौता भएका छन् । मलाई लाग्छ, दाताहरू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले हात हाल्न खोजेकोे छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकार निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक छ । अर्को कुरा पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ । निजी क्षेत्रको सहयोगबिना विकास–निर्माणले गति लिन सक्दैन भन्ने सरकारले पनि बुझेको छ । संविधानले समेत तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेकाले निजी क्षेत्रले कुनै शंका मान्नु पर्दैन ।
बैंकिङ क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने हालै मात्र बाफिया कानुनको कुरा अघि बढेको छ । बाफिया कानुन बनिसकेपछि पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा पर्नेछ । हामी निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नेछौं । पूर्वाधार विकास नभई अरू विकास हुन सक्दैन, यसमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता छ ।
लगानीकर्ताले नीति–नियम भन्दा बढी ब्युरोक्रेसीको झमेलाले समस्या बेहोर्नुपरेको बताइन्छ । एउटै फाइल महिनौं दिनसम्म अड्काइन्छ भन्ने आरोप छ नि ?
समस्या सबैतिर छन् । मन्त्रालयले गर्ने प्रक्रियागत झन्झटिला कुरा पनि छन् । कतिपय कुरा पहिचान गरिएको छ । संसद्बाट एकचोटि स्वीकृति गरेको बजेटलाई अर्थमन्त्रालयबाट किन स्वीकृति दिनुप¥यो भन्ने पनि छ । यस्ता अवरोधहरू हटाउने प्रक्रियामा छौं । पहिलेको तुलनामा वातावरण त बनेको छ ।
मैले आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट सहज बनाउन खोजिरहको छु । त्यसका साथै कार्यक्षमता तथा अन्य विषयमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर मन्त्रालयका तर्फबाट के कसरी सहज बनाउन सकिन्छ त्यसमा हामी लागिरहेका छांै । प्राविधिक जटिलता कम गर्न खोजेका छौं । तर, हाम्रो मात्रै समस्या होइन, कतिपय अवस्थामा उनीहरूकोमा पनि जटिलता छ ।
हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं, संघीयतामा जाँदा राज्यलाई थप भार पर्ने देखिन्छ । यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?
हो, संघीयतामा जाँदा आर्थिक भार पर्ने त निश्चित छ नै । स्थानीय तहमा जाँदा स्रोत पनि बढ्दै जान्छ । प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ । यसमा दुई कुरा छन् । संघीयतामा जाने निर्णय गर्दा स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न हुने गरी जाने हो । ती निकायहरूले आफ्नो विकास आफैं गर्छन् ।
पूरक बजेटको कुरा छ, हामीसँग बजेट पनि छ, स्रोत पनि बढ्दै जान्छ । अर्को कुरा, चुनाव हुनेबित्तिकै स्थानीय निकायको पुनःसंरचना हुने निश्चित छ ।
पूरक बजेटमा अन्योल कायमै
काठमाडौंः सरकारले राजनीतिक सहमतिबाटै १ खर्ब रुपैयाँबराबरको पूरक बजेट ल्याउने बताए पनि आवश्यक तयारी टर्दै जाँदा बजेट आउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलबीच ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा पुसको दोस्रो साता बितिसक्दासम्ममा पनि पूरक बजेट आउने नआउनेमा अन्योलता देखिएको हो ।
राजनीतिक सहमति भएमात्रै पूरक बजेट ल्याउने भनिए पनि सहमति हुन नसकेपछि तयारी गर्न कठिनाइ भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार रकम जुटाउन समस्या नदेखिए पनि तयारीका लागि पर्याप्त समय छैन ।
सरकारले सहमति भएमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्न कम्तीमा पनि करिब १ महिनाको समय चाहिने बताउँदै आएको छ ।
“पूरक बजेटका विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर आउने नआउने निश्चित छैन,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रालयमा हुने नियमित बैठकमा समेत पूरक बजेटको आवश्यकता औंल्याउँदै राजनीतिक सहमतिको प्रयास जारी रहेको जानकारी दिने गरेका छन् ।
मन्त्री महराले कर्मचारीलाई बजेटको तयारी गर्न निर्देशनसमेत दिँदै आएका छन् । ती अधिकारीले पूरक बजेट ल्याउने निर्णय राजनीतिक भए पनि पुसभित्रै सहमति आउन नसके औचित्य नहुने दाबीसमेत गरे ।
“राजनीतिक सहमति भए एक साताको तयारीमा नै पूरक बजेट ल्याउन सकिन्छ, हामी सहमतिको प्रतीक्षामा छौं,” अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले भने, “प्रधानमन्त्रीले सदनमा सम्बोधन गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न पूरक बजेट आवश्यक छ ।”
सदनबाट घोषणा गरिएका नयाँ कार्यक्रमका लागि पूरक बजेटको आवश्यकता देखिएको र यो सबैको साझा विषय भएकाले ढिलै भए पनि सहमति जुट्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा समेटिएका कार्यक्रमका लागि करिब १ खर्ब २० अर्ब जति बजेट आवश्यक हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्प प्रभावितलाई पूर्ववर्ती सरकारले घोषणा गरेको २ लाख अनुदान कम भएको भन्दै थप १ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए ।
त्यस्तै, प्राचीन सम्पदा निर्माण तथा विपन्न वर्गका कार्यक्रमका लागि चालू बजेटको खर्चले नधान्ने भएकाले पूरक बजेटबारे छलफल भएको उनको दाबी छ । “प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम नियमित बजेटमा छैनन्,” उनले भने, “ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूरक बजेट नै चाहिन्छ ।”
मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. रेग्मीले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठिरहेको र नेपालका विकास साझेदारले पनि आफ्ना केही कार्यक्रमका बजेट बचाएकाले स्रोतको समस्या नहुने जिकिर गरे । “राज्यको ढुकुटीमा रहेको पुँजी परिचालन गर्न सकियो भने कसैलाई पनि घाटा हुँदैन, सरकारसँग पैसा भएकाले स्रोतको समस्या पर्दैन,” उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारको ढुकुटीमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन अघि नै चालू आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
तर, लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमण, अक्षम सरकारी कर्मचारीतन्त्र तथा जटिल कानुनी प्रावधानका कारण चालू आर्थिक वर्षको आधा समय सकिन लाग्दा पनि २० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।
प्रोजेक्ट बैंक स्थापना गर्दै लगानी बोर्ड, एक सय २२ आयोजना सूचीकरणकाे तयारी
काठमाडौँ। ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गर्ने भएको छ ।
नेपालमा लगानी गर्न चाहने जो कोही लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । बोर्डले प्रारम्भिक रुपमा एक सय २२ वटा आयोजनालाई त्यसमा सूचीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जा, यातायात, कृषि, खानी तथा खनिज, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना सञ्चार प्रविधि र उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रलाई त्यसमा सहभागी गराइने बोर्डको लक्ष्य छ ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागसँग भएको छलफलका आधारमा प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको समग्र जानकारी दिने गरी बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । लगानीकर्ताले त्यस्ता बैंकमार्फत आयोजनाको लागत, लगानीको क्षेत्र, पहुँच तथा सरकारी निकायको सहयोग तथा स्थानीय आवश्यकताका बारेमा समेत जानकारी दिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताए।
लगानीकर्ताले बैंकमार्फत आयोजनाको जानकारी मात्रै प्राप्त गर्ने नभई प्रतिफलको समेत सुनिश्चितता गराउने, मुलुकको आर्थिक विकासमा त्यस्ता आयोजनाको प्रभाव तथा रोजगारीका अवसरबारे यथेष्ट सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भारत, चीनजस्ता मुलुकमा पनि त्यसखालको संयन्त्र बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकास गर्ने हो भने परम्परागत तवरले अगाडि जानै नसक्ने धारणा राखे ।
बोर्डले नर्वेजियन कम्पनी स्ट्याट क्राफ्टले छाडेकाले तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै अगाडि बढाउने विकल्पका बारेमा छलफल सुरु गरेको जनाएको छ । “कुल ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्थानीय लगानीकर्ता, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयर दिएर आन्तरिक रुपमा नै निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले छलफल चलाएका छौँ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने ।
सर्वेक्षण अनुमति लिएर काम गरिरहेको नर्वेजियन कम्पनी गत वर्ष विद्युत्को बजार नभएको भन्दै बाहिरिएको थियो । बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा प्रवद्र्धकले आयोजना छाड्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै निर्णय भएको थिएन ।
सरकार र थ्री गर्जेजबीच भएको प्रारम्भिक समझदारीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षले प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीको दायित्वसमेत न्यून ब्याजदरमा चिनियाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ । रु एक खर्ब ४८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाको सबैभन्दा जटिल पक्ष पुनः स्थापना र जग्गा प्राप्ति रहेको छ ।
औषधि उद्योग पीपीपी मोडेलमै
काठमाडौंः उद्योग मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्पहरू अघि सारे पनि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाटै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ । सरकार आफैंले लगानी गर्ने अवस्था नरहेको तथा निजी क्षेत्रलाई सुम्पने अवस्थासमेत नरहेको भन्दै अर्थले पीपीपी मोडलमै सञ्चालन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
उद्योग सञ्चालनका लागि एक अर्बभन्दा बढी पुँजी आवश्यक भए पनि सरकारी स्रोतबाट सम्भव देखिँदैन ।
सरकारले चार महिनाअघि औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनको घोषणा गरेको थियो । तर, कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय हुन नसक्दा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बन्द रहेका सबै संस्थान खुलाउने प्रयास भइरहेको र यसमध्ये पहिलो चरणमा औषधि लिमिटेड र हेटांैडा कपडा उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
औषधि लिमिटेड सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १४ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । तर, उद्योग मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा उक्त रकम समेत लिन सकेको छैन । “पहिलो चरणमा औषधि लिमिटेड र हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय भइसकेको छ, अब सञ्चालनको मोडालिटी तय हुँदैछ,” संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष वासुदेव शर्माले भने । उनका अनुसार पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न सबै पक्ष सकारात्मक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न लागेको छ ।
कुनै समय मुलुकमै लोकप्रिय रहेको सिटामोल, जीवनजल लगायतका लोकप्रिय औषधि उत्पादन गर्दै आएको लिमिटेड बजार र सम्भाव्यता हँुदाहँुदै पनि औषधिको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा अहिले बन्द छ । एक दशकअघिसम्म झण्डै १ सय २० प्रकारका विभिन्न औषधि उत्पादन गर्दै आएको लिमिटेड २०६७ देखि लिमिटेडले कुनै उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
शर्माले हेटौंडा कपडा उद्योग सुरक्षा निकायले सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि (सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी एवं निजी क्षेत्र) सबै साझेदारले २५ करोड रुपैयाँका दरले लगानी गर्नेछन् ।
“हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन भए नेपाली सेना, प्रहरी सशस्त्रले प्रयोग गर्ने लत्ता कपडाहरू उत्पादन हुनेछ,” उनले भने । उद्योग सञ्चालन गर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभागको नेतृत्वमा उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरेका छन् ।
शर्माले प्रारम्भिक चरणमा सञ्चालन गर्न खोजिएका संस्थानको मोडालिटी उपयुक्त देखिएमा अन्य संस्थान पनि सोही मोडालिटीबाटै सञ्चालन हुनसक्ने बताए । गत साता उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा बसेको संस्थान निजीकरण समिति बैठकले दुई सस्थानलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्दै उपयुक्त मोडालिटी तय गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।
हिमाल आइरनका ५५ वर्ष
आगलागीका कारण परिवार ऋणको बोझले थिचिएका थियो । व्यापार तहसनहस भएको थियो । कलिलै उमेर (१५ वर्ष) मा छोरा मणिहर्ष ज्योति बावु भाजुरत्नको ऋण चुक्ता गराउन तम्सिए, कोलकातातिर हान्निएका तिनै मणिहर्षले ५५ वर्षअघि नेपालमा पहिलोपटक फलामे डन्डीको उत्पादन थालेका थिए । डन्डीको प्रयोग नगरी घर बनाउने बेलामा उनले उत्पादन थालेका थिए । अहिले थुप्रै उद्योग सञ्चालनमा छन्, तिनको उत्पादन क्षमता घरेलु मागको दोब्बरजति छ । केलटोलका कंसाकार भाजुरत्न काठमाडौंमा नाम चलेकै साहू थिए ।
कपडाको व्यापार थियो । तर, पसलमा आगलागी भएपछि व्यवहार बिग्रियो, ऋण लाग्यो । तनावमा रहेको परिवारलाई ऋणमुक्त गर्न कोलकाता गएका मणिहर्षले त्यहाँ नेपाली साहूका घरमा भान्छे काम गरेर पढ्न थाले । त्यो बेला काठमाडौंका ठूला साहूको कोलकातामा कोठी थियो । ल्हासा-कोलकाता पनि व्यापार हुन्थ्यो, यो रुटको एउटा बेस कालिम्पोङ थियो । भाजुरत्नचाहिँ व्यापार गर्न ल्हासातिर लागे । काठमाडौंका नेवार परिवारको व्यापार गर्ने केन्द्र ल्हासा थियो । चीनले चढाइ गर्नु अघिसम्म ल्हासाको व्यापारमा काठमाडौंका नेवार साहूजीको दबदबा थियो ।
पढाइ सिध्याएपछि मणिहर्षले कोलकाता बन्दरगाहमा क्लियरिङको काम सुरु गरे । क्लियरिङको काममा यति सफल भए, उनी सयौंलाई रोजगारी दिन सक्ने भए । स्वतन्त्रतापछि भारत सरकारले भिलाइमा आइरन उत्पादनको ठूलो उद्योग स्थापना गर्‌यो । त्यो उद्योगलाई चाहिने आइरन इंगट (फलामे ढुंगा) आपूर्तिको ठेक्का मणिहर्षले पाए । सप्लायर भएको हुँदा भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसादले गरेको प्लान्टको उद्घाटनमा ज्योति परिवार आमन्त्रित थियो । आफूसमेत उद्घाटन कार्यक्रममा गएको बाल्यकालको धूमिल सम्झना मणिहर्षका छोरा पद्य ज्योतिलाई अझै छ । मणिहर्ष व्यापारमा चम्किए, काठमाडौंमा साहूजीको ऋण चुक्ता गरेर परिवारलाई ऋणमुक्त बनाए ।
व्यापारमा चम्किएपछि कोलकातामा मणिहर्षको कोलकाता निवासी नेपालीको जमघट हुने एउटा केन्द्र बनेको थियो । निर्वासित नेता, भिक्षु, कोलकाता पुग्ने नेपाली धेरै उनको सम्पर्कमा थिए । बीपी कोइरालालगायतले उनलाई स्वदेशमै उद्योग, व्यापार गर्न उक्साउँथे । इन्डियामा इंगोट सप्लाइ गर्ने भएकाले उनलाई आइरन उद्योगको आइडिया थियो । त्यो बेला घर बनाउँदा डन्डी प्रयोग गर्ने चलन थिएन । धनीमानीले इँटामा सुर्की/चुनाको जोडाइमा घर बनाउँथे । सरकारी भवन पनि यसरी नै बनाइन्थ्यो । सामान्यले काँचो इँटामा माटोको जोडाइ गर्थे ।
ज्योति परिवार बस्ने जमलको घर पनि डन्डी प्रयोग नगरी बनाइएको थियो । पद्य ज्योति बस्ने त्यो घर अहिले पनि पुरानै संरचनामा छ, सुर्की/चुनाको जोडाइमा बनेको । तैपनि डन्डी उत्पादन हुन थालेपछि क्रमशः डन्डीको प्रयोग हुनेमा उनी विश्वस्त थिए । किनकी भारतमै पनि घर निर्माणमा डन्डी प्रयोग हुन थालिसकेको थियो । मणिहर्ष कोलकाता छँदा भीमबहादुर पाँडे (सरदार) सँग दोस्ती भएको थियो, हिमाल आइरनमा उनले पनि थोरै लगानी गरे । ध्रुवभक्त माथेमा (केदारभक्त माथेमाका बुवा) को पनि थोरै सेयर रह्यो ।
हिमाल आइरन २०१८ सालमा दर्ता भयो । पद्य ज्योतिका अनुसार निर्माण कार्य त्यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो । उद्योग स्थापना गर्न बाराको परवानीपुरमा जग्गा खरिद गरिएको थियो । परवानीपुर त्यतिबेला निर्जन ठाउँ थियो । परवानीपुरबाट दक्षिणमा एकैचोटी वीरगन्जमा वस्ती थियो, सिमरासम्म कुनै उद्योग थिएनन् । आयात निर्यातको नाका वीरगन्ज नजिक पर्नुका साथै रक्सोल- अमलेखगन्ज रेल चल्ने भएकाले उनले परवानीपुरलाई उद्योगका लागि सही ठाउँ ठहर्‌याएका थिए । तर, उद्योग चलाउन बिजुलीसम्म थिएन ।
उद्योग चलाउन पानी जहाज चलाउने पाँच सय हर्सपावरको जेनरेटर ल्याइएको थियो । जापानबाट मेसिनरी ल्याई उद्योग तयार बनाइयो । तर, ट्रायल उत्पादन गर्ने बेला बिपद आयो । हावाहुरीले उद्योगको संरचना नै भत्कायो । धन्न मुख्य मेसिनमा क्षति पुगेको थिएन । पद्य ज्योतिका अनुसार बैंकले थप ऋण दिए, साँवा ब्याज तिर्न पुनर्तालिकीकरण गर्दिए । मणिहर्ष ज्योतिले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गरे ।
उत्पादन सुरु भएपछि पनि अवस्था सजिलो थिएन । भारुसँग नेरुको अवमूल्यन भयो, उत्पादन लागत बढ्यो । घर निर्माणमा डन्डी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नै उपभोक्तामा थिएन । हिमाल आइरनको प्लान्ट निर्माण गर्दा क्वाटर निर्माण गर्दा पनि छड प्रयोग भएको थिएन । उत्पादन सुरु भएको आठ वर्षसम्म हिमाल आइरन गाह्रो अवस्थाबाट गुज्रिएको पद्य ज्योति बताउँछन् । घर निर्माणमा गर्ने इन्जिनियर उत्पादन हुँदै थिए । तिनले डन्डी प्रयोग गरेर घर बनाउन पर्छ भनेर परामर्श दिन थाले क्रमशः डन्डीको माग बढ्न थाल्यो ।
स्थापनाकालदेखि नै हिमाल आइरन पद्य ज्योतिको घरजस्तै भयो । पढ्दै गर्दा बिदामा काठमाडौं आउँदा भारत फर्किंदा उनी परवानीपुरमै केही दिन बिताउँथे । इन्जिनियरिङको पढाइ सकेर २०२६ सालमा फर्किएपछि त बुवाले उनलाई फ्याक्ट्री चलाउन ढुक्कै परवानीपुरमा राख्दिए । परवानीपुरमा बिजुली, टेलिफोन थिएन । टेलिफोन गर्न रक्सोल पुग्न पथ्र्यो । कच्चा पदार्थ ढिलो भयो, मर्मत गर्न मिस्त्री बोलाउन पर्‌यो-टेलिफोन गर्न रक्सोल पुग्न पथ्र्यो,' पद्य ज्योति सम्झिन्छन्, 'रक्सोलमा घुमाउने फोन थियो ।' गर्मी महिनामा क्वाटरको छतमा झूल हालेर सुत्न पथ्र्यो ।
२०२८ सालमा बिवाह भएपछि भोजको पर्सिपल्टै पद्य ज्योतिलाई मणिहर्षले परवानीपुर पठाएका थिए । एक वर्षपछि व्यवस्थापनमा मास्टर्स गर्न उनी अमेरिकाको एमआईटी गए, एक वर्षमा पढाइ सक्काएर फ्याक्ट्री मै खटिए ।
डन्डी उत्पादनको प्रविधि अहिले जस्तो स्वचालित हुने कुरै भएन । हरेक चरणमा मजदुरको काम हुन्थ्यो । भट्टीमा बिलेट हाल्यो, डन्डी निक्लेपछि मजदुरले चिम्टाले अर्को मेसिनमा राख्यो । यसरी डन्डी उत्पादन हुन्थ्यो ।
२०४५/४६ सालतिर बल्ल उत्पादनको आधुनिकीकरण भयो । स्वचालित मेसिनबाट डन्डी उत्पादन हुन थाल्यो । यसअघि बुट्टा नभएको सपाट डन्डी उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले मेसिनको बटन थिचेको भरमा डन्डी उत्पादन हुन्छ । आधुनिकीकरणपछि बुट्टेदार डन्डी उत्पादन हुन थाल्यो, यस्तो प्रविधिले डन्डीको 'स्ट्रेन्थ' ६० प्रतिशतले बढ्यो । टरस्टिलपछि टीएमटी प्रविधि भित्रिसकेको छ । तैपनि पद्य ज्योति टीएमटीभन्दा टरस्टिल ठीक ठहर्‌याउँछन् ।
टरस्टिलमा डन्डी निस्केपछि फेरि घुमाउन (ट्विस्ट गर्न) पर्छ । यदि डन्डी कच्चा छ भने ट्विस्ट गर्दा ठनक्क भाँचिन्छ । टीएमटीमा डन्डी निस्केपछि पानीको प्रेसर दिएर तापक्रम झारिन्छ, यसरी स्ट्रेन्थ बढाउने काम हुन्छ । तर, पानीको प्रेसर कस्तो थियो, स्ट्रेन्थ पुग्यो/पुगेन अन्योल हुन्छ । स्ट्रेन्थ नपुगेको डन्डी पनि उपभोक्तासम्म पुग्ने खतरा हुन्छ । यसैले कम्पनीको विश्वासमा डन्डी प्रयोग गर्नुपर्छ, टरस्टिलजस्तो कडा परीक्षणबाट गुज्रिएको हुन्न ।
तर, टरस्टिल लामो/महँगो प्रविधि भएकाले संसारभरि टीएमटी प्रचलित छ । बरु, परीक्षण ल्याब राखेर टीएमटी उत्पादन गरिन्छ । काठमाडौंमा बलियो घर बनाउन चाहनेका लागि इन्जिनियरले सिफारिस गर्ने भएकाले हिमाल आइरनले टीएमटीका साथै टरस्टिलको उत्पादन जारी राखेको छ तर उत्पादनको ३० प्रतिशतमात्र टरस्टिल उत्पादन हुन्छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रबाट ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्, डन्डीलगायतका निर्माण सामग्रीको बजार फराकिलो भएको छ । पद्य ज्योतिले सम्झेसम्म हिमाल आइरन स्थापनाको दुई दशकसम्म दोस्रो रोलिङ मिल स्थापना भएको थिएन । विराटनगरमा एभरेस्ट रोलिङ मिल स्थापना भएपछि बल्ल हिमाल आइरनले प्रतिस्पर्धी पायो । त्यसपछि पञ्चकन्या, कमला स्टिल, अशोक स्टिल स्थापना भयो । त्यतिन्जेलसम्म पानी जहाजको जेनरेटरबाट डन्डी उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन, उद्योगले बिजुली पाउन थालिसकेका थिए ।
ठूलाठूला लगानीका रोलिङ मिल स्थापना भएका छन् । बिक्रीको आधारमा हिमाल आइरन पहिलो नम्बरमा छैन । तैपनि गुणस्तरका साथै स्वच्छ कारोबारमा हिमाल आइरनले सम्झौत नगरेको पद्य ज्योति सुनाउँछन् । डन्डी बनाउने कच्चा पदार्थ (एमएस बिलेट) मा हिमाल आइरनले सम्झौता गरेन, प्राइम बिलेटमात्र प्रयोग गर्‌यो । सुरुमा प्राइम बिलेटको स्रोत भिलाइको स्टिल प्लान्ट थियो, पछि टाटाले पनि उत्पादन थाल्यो ।
दक्षिण कोरियाबाट पनि बिलेट आयात गर्‌यो । पछिल्लो समय चीन पनि बिलेटको स्रोत भएको छ । वजनमा तलमाथि नहोस् भनेर प्राइस ट्याग लगाइएको छ । आधिकारिक बिक्रेताबाहेकले हिमाल आइरन बेच्न पाउँदैनन् । हिमाल आइरनको उत्पादन बेच्दा उत्पादक कम्पनीले दिएको बिल काट्नुपर्छ । यसरी कारोबार गर्दा हिसाब किताबमा पनि लागत बढ्छ । 'तैपनि ग्राहकको सन्तुष्टि र राजस्वमा तलमाथि नहोस भनेर गरिरहेका छौं', पद्य ज्योति सुनाउँछन् । हिमाल आइरन २०१८ सालमा दर्ता भयो । निर्माण कार्य त्यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो ।
(अन्नपुर्ण पोष्टबाट साभार गरिएको)